အပြင်မထွက်ရလို့ အိမ်ခေါင်မိုးထပ်လေး(rooftop)မှာပဲ ချစ်သူနဲ့ ဒိတ်နေတယ် ဆိုတဲ့ ပိုပို – Shwe Likes
Shwe | September 14, 2020 | Celebrity | No Comments
လူငယ်အ ကြိုက်သီချ င်းကောင်းေ လးတွေနဲ့ ပရိ သတ်တွေရဲ့ရင်ထဲ အခိုင်အ မာတိုးဝင် နေရာယူ ထားသူလေး ကတော့ အဆိုတော်မလေး ပိုပိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ဂီတပိုင်းမှာ အောင်မြင် မှုတွေ များစွာရရှိထားတဲ့ ပိုပိုကတော့ ချစ်စရာ ဝန်ပန်ေ လးတွေနဲ့အတူ ဇာတ်လမ်းတွဲ လည်း ရိုက်ကူးထားပြီး ပြည်သူချစ်တဲ့ အနုပညာ ရှင်အဖြစ် ရပ်တည်နေ သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်.. ။
အပြင်မထွက်ရလို့ အိမ်ခေါင်မိုးထပ်လေးမှာပဲ ချစ်သူနဲ့ ဒိတ်နေတယ် ဆိုတဲ့ ပိုပို
ပိုပို ကတော့ အခုလို Stay Home ကာလေ လးမှာလည်း ပ ရိသတ်တွေကို ကျန်းမာကြစေဖို့ ဆုတောင်းစကားေ လးဆိုလို က်ပြီး အိမ်မှာပဲ အပန်ြးေ ဖအနားယူနေတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်ေ လးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို အချစ်ပိုစေပြန်ပါတယ်နော်..။ အေးအေးချမ်းချမ်း အပန်းဖြေေ နတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ဝေမျှရင်း သူမရဲ့ချစ်သူအကြော င်းလေးကိုလည်း အရွှန်းဖော က်ပြောရးကာ စနောက်ရင်း ပရိသတ်တွေ ကိုလည်း ကျန်းမာရေးဂရုစို က်ကြဖို့ ပြောထားပါသေးတယ်နော်..။
“ချစ်သူနဲ့ ဒိတ်မယ်ပေါ့ သွားစရာနေရာ မရှိတော့လဲ rooftop မှာပဲ ချစ်သူနဲ့ ဒိတ်တော့မယ် (ပို့ချစ်သူက မျက်မှန်နဲ့ အလန်းနော် ရှင်တို့မှာရောရှိလား??? )
ကဲ ပရိတ်သတ်တွေလဲ ဖြစ်နိုင်ရင် အိမ်မှာပဲနေကြပါ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ Vitamin တွေ ပါတဲ့ အသီးအရွက်များများစားပါ..” ဆိုပြီး ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှထားတာပါ..။ ချစ်စရာလည်းကောင်းသလို စတတ်နောက်တတ်တဲ့ ပိုပိုရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သဘေယကျ အချစ်ပိုနေကြမှာပါနော်..။
လူငယျအ ကွိုကျသီခြ ငျးကောငျးေ လးတှနေဲ့ ပရိ သတျတှရေဲ့ရငျထဲ အခိုငျအ မာတိုးဝငျ နရောယူ ထားသူလေး ကတော့ အဆိုတျောမလေး ပိုပိုပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။ ဂီတပိုငျးမှာ အောငျမွငျ မှုတှေ မြားစှာရရှိထားတဲ့ ပိုပိုကတော့ ခဈြစရာ ဝနျပနျေ လးတှနေဲ့အတူ ဇာတျလမျးတှဲ လညျး ရိုကျကူးထားပွီး ပွညျသူခဈြတဲ့ အနုပညာ ရှငျအဖွဈ ရပျတညျနေ သူလညျး ဖွဈပါတယျနျော.. ။
ပိုပို ကတော့ အခုလို Stay Home ကာလေ လးမှာလညျး ပ ရိသတျတှကေို ကနျြးမာကွစဖေို့ ဆုတောငျးစကားေ လးဆိုလို ကျပွီး အိမျမှာပဲ အပနျွးေ ဖအနားယူနတေဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပျေ လးတှနေဲ့ ပရိသတျတှေ ကို အခဈြပိုစပွေနျပါတယျနျော..။ အေးအေးခမျြးခမျြး အပနျးဖွေေ နတဲ့ ပုံရိပျလေးတှေ ကို ဝမြှေရငျး သူမရဲ့ခဈြသူအကွော ငျးလေးကိုလညျး အရှနျးဖော ကျပွောရးကာ စနောကျရငျး ပရိသတျတှေ ကိုလညျး ကနျြးမာရေးဂရုစို ကျကွဖို့ ပွောထားပါသေးတယျနျော..။
“ခဈြသူနဲ့ ဒိတျမယျပေါ့ သှားစရာနရော မရှိတော့လဲ rooftop မှာပဲ ခဈြသူနဲ့ ဒိတျတော့မယျ (ပို့ခဈြသူက မကျြမှနျနဲ့ အလနျးနျော ရှငျတို့မှာရောရှိလား??? )
ကဲ ပရိတျသတျတှလေဲ ဖွဈနိုငျရငျ အိမျမှာပဲနကွေပါ ကနျြးမာရေးဂရုစိုကျပါ Vitamin တှေ ပါတဲ့ အသီးအရှကျမြားမြားစားပါ..” ဆိုပွီး ပုံရိပျလေးတှကေို ဝမြှေထားတာပါ..။ ခဈြစရာလညျးကောငျးသလို စတတျနောကျတတျတဲ့ ပိုပိုရဲ့ ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှကေိုတော့ ပရိသတျတှလေညျး သဘယေကြ အခဈြပိုနကွေမှာပါနျော..။
အမေစုရဲ့ မွေးနေ့လေး အတွက် အရမ်းလှတဲ့မွေးနေ့ကိတ် နီနီရဲရဲလေးကို သွားပို့ပေးခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်
ဒေါ် လာတွေ အပြည့်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ပန်းစည်းကြီး ကို ကိုင်ထား တဲ့ ပုံရိပ်လေးကြောင့် ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားခြင်းခံ ခဲ့ရ တဲ့ ခေးဆက်သွင်
ရစေိုစို အလှတှကေ စှဲမ ကျစရာကောငျးေ လာကျအောငျ လှပနတေဲ့ ဂန်တဝငျ
ဖြူဖြူထွေး ကြောင့် အနုပ ညာလော ကကြီး ကို မထိခိုက်စေချင်ဘူး လို့ ထပ်မံ ပြောလာတဲ့ မင်းခန့်ကျော်(ရုပ်သံ)